नेपाली राजनीतिमा शिष्टता र सभ्यता हराँउदै गयो! (भिडियो) « News24 : Premium News Channel
नेपाली राजनीतिमा शिष्टता र सभ्यता हराँउदै गयो! (भिडियो)
काठमाडौं । हतास मानसिकताको उपज हो या स्वभाविक आक्रोश ? काँग्रेसका साँसद नरोत्तम वैद्यको अभिव्यक्तिलाई लिएर अहिले बिभिन्न कोणबाट अर्थ खोज्न सुरु गरिएको छ । आफ्नै दल नेपाली काँग्रेसलाई नै लज्जाबोध हुने गरि जुन अभिव्यक्ति दिए त्यस्को अन्तर्य के हुनसक्छ ?
नेताहरुमा देखिएको यो प्रवृति कहिले आवेगको हुन सक्ने र उनको अवस्था हेरेर विश्लेषण गर्नु पर्ने मनोचिकित्सकहरुको निष्कर्ष छ भने समाजप्रति रहेको दायित्वलाई ध्यान दिएर मात्र धारणा राख्नु पर्ने मानवशास्त्रीहरुको मत छ ।
संघीय संसदमा नेताहरुबीच चल्ने दोहोरी मात्र नभइ बिभिन्न राजनीतिक मञ्चहरुबाट एक अर्काविरुद्ध प्रयोग गर्ने ‘तल्लोस्तरका शब्दहरुले’ नेपालका नेताहरुको मानसिकता छर्लङ्ग पार्दै आएको छ ।
तत्कालीन नेकपा विभाजित बनेपछि प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले जति धुँदा पनि गाई बनाउन नसकिएकाहरु भन्दै पुष्पकमल दाहाल प्रचण्ड र माधवकुमार नेपालहरुमाथि प्रयोग गरेको शब्द हुन या प्रचण्डले कुहिएको अण्डा’ भन्दै ओलीलाई देखाएको औलाले नेताहरुको मानसिक अवस्थालाई समेत प्रष्ट पारेको छ ।
नेपाली शब्दकोषका घिनलाग्दा र अप्रिय लाग्ने शब्दहरुको चयन र प्रयोग गर्न माहिर नेपाली नेताहरुको बिचमा पशुपतिनाथको नाम जपेर हिड्ने नरोत्तम बैध पनि थपिए । सडकमा सुनेको धारणा भन्दै बैद्यले प्रधानमन्त्री ओलीमाथि जुन टिप्पणी गरे त्यो नेपाली समाजका लागि सुहाउने र पाच्य हुने भाषा होइनन् ।
पशुपतिनाथमा जलहरी राख्ने विषयदेखि नै पशुपति क्षेत्र विकास कोषमा पूर्व सदस्य बैद्य ओलीप्रति आक्रोशित थिए । तर सर्वत्र आलोचना भएपछि र पार्टीले अभिव्यक्तिप्रति आत्मालोचना गर्न दबाब दिएपछि उनले बागमती प्रदेश सभामै आफ्नो भनाइ सच्याएका छन् ।
राजनीतिको उच्च तहमा बसेका नेताहरुले क्षणिक आवेग र तालीको लोभमा मर्यादा विर्सिएर गर्ने टिप्पणीहरुले उनीहरुको उचाईलाई नै घटाउँदै आएको छ । समग्र समाजलाई सकारात्मक दिशातर्फ उन्मुख गराउने या नकारात्मक बाटोतर्फ लाने भन्ने दायित्व कुनै न कुनै रुपमा नेताहरुसंग जोडिएकै हुन्छ ।
तर उनीहरुले नै प्रयोग गर्ने गरेका भद्दा र गैर जिम्मेवारपूर्ण अभिव्यक्तिले राजनीतिमा शिष्टता र सभ्यता हराउँदै महसुस गर्न थालिएको छ । जस्को कारण पनि नेताहरुले अवधारणा राख्दा ध्यान नपु¥याएर त्यस्ले गम्भीर अवस्था सिर्जना गर्न सक्ने समाजशास्त्रीहरुको तर्क छ ।
यता मनोचिकित्सकहरु नेताहरुमा देखिने गरेको आवेग कतिपय अवस्थामा सांकेतिक हुनसक्ने बताउँदै केहीले भने आफूमा रहेको कुण्ठित भावना पोख्दा अभिव्यक्ति विवादास्पद हुने गरेको बताउछन ।
सकारात्मक सोंच र शिष्ट व्यवहार व्यक्तिको सफलताका लागि उत्तम गुण मानिन्छ । जुन समाज र राष्ट्रका लागि पनि हितकर हुन्छ । तर नेताहरुको अशिष्ट व्यवहार एवं अभद्र अभिव्यक्तिले सभ्य समाजको परिकल्पना धुमिल बन्दै गएको छ ।